အမျိုးမျိုးသော xp များ... — MYSTERY ZILLION
အမျိုးမျိုးသော xp များ...
August 2009 edited October 2009 in Sharing
ကျတော် ဒီသရက်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ထားတဲ့ အမျိုးမျိုးသော xp များ ကိုတတ်
နိုင်သလောက်ရှာဖွေပြီးတင်ပေးသွားမျာဖြစ်ပါတယ်... window vista ,window7တို့ တွေထွက်လာတာနဲ့အပြိုင် xp ချစ်သူများကလဲ သူတို့ချစ်တဲ့ xp ကိုအမျိုးမျိုး ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး ထုတ်ထားပါတယ်... driver တွေ template တွေ အစုံအလင်နဲ့ ဝင်းဒိုး တင်ပြီး ပြန်လှည့် ကြည့်စရာမလိုလောက်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ဟာတွေ ကိုတင်ပေးသွားပါမယ်ဗျာ...လက်ရှိ ကျတော် ဒေါင်းပြီးစမ်းသပ် ထား ပြီးအစဉ်ပြေတဲ့ တစ်ခု ကိုစပြီးဒေါင်း လော့ဒ်လင့်နျင်တကွ တင်ပေးပါမယ်... ညဘက်ကွန်ကောင်း ပြီးဒေါင်းလော့ဒ် လုပ်ကာစမ်းသပ်ပြီး MZ မန်ဘာတွေကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေချင် သူ အင်တာနက်တိုင်ပိုင်ရှင်များ အနေနဲ့ ရပ်ပစ် ပရီမီယန်အကောင့် ရှိသူများနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး အကောင့်ငှားကာ ဒေါင်းနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် လောလောဆယ်တော့ ကို ပုရင့်ဆီမှာ ခန ငှားလို့ရမယ်ထင်တယ်... :D:D အရင်ဆုံး rar နဲ့ခွဲထားတဲ့ဖိုင်တွေကို ISO ပြန်လုံးဖို့ ISO maker လေး ဒီမှာယူပါဗျာ...
သူ့ screen shoot တွေကတော့ ဒီမှာပါ...
driver တွေအပြင် ယိုးဒယား ကီးဘုတ် နဲ့ eng ပြကဒိန် ပါ ပါပါတယ်... ဆိုဒ်ကတော့ ISO လုံးလိုက်ရင် 700 M ပဲရှိတဲ့အတွက် CD နဲ့ဆို ok ပါတယ်... ကျတော် AMD 64tm 3000+ memory 1G နဲ့စမ်းတာတော့ ပေါ့ပါး ပါတယ် driver တွေလဲအကုန်ပါပါတယ်... nvedia nforce, Gfoece တွေလဲအစဉ်ပြေစွာအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဗျာ...
ရုံးတွေမှာ ... အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ ...
ကွန်နက်ရှင်တွေနှေးသွားတယ် ... ဘယ်သူတွေ ဒေါင်းလုပ်အရမ်းလုပ်နေကြလဲမသိဘူး ...
ဒေါင်းလုပ်ဆိုက်တွေက ကြီးလိုက်တာ ...
အသံတွေထွက်လာလို့ကတော့ ... ရသာကြောင့်ပဲ ... :d
အနော်ပြောတာ အင်တာနက်ဆိုင်ပိုင်ရင်တွေကို ညဘက်မှပဲဒေါင်းပါလို့လေ....:d:d:d :p:p
အဲကြောင့်ထင်တယ်.....မီးမီးတို့ဆိုင် အခုတလော တော်တော်နှေးသွားတယ်။
ဒါနဲ့ တလက်စတည်း ရက်ပစ်အကောင့်လေး လိုချင်လို့ ။ ဦးရသာပေးတာလေးဆွဲချင်တယ်။ ဦးရ ကုူညီပါ............:d
ငြိမ်းချမ်းသွင wrote: »
ကိုဝင်းလွင်က တစ်လစာ အကောင် ဂျီမေးနဲ့ပေးမယ်တဲ့... ကိုပုရင့်ကတော့ ဒီနေ့မလာသေးဘူး.. သူ့ဆီမှာလဲရှိတယ်ဗျ... :d:d:d သူတို့ဆီ မျက်စ လှမ်းပစ်ပြလိုက် ဟီးးးးး :d:d:d
ဒါကတော့ Windows_XP_Vortex_Vista_3rd_Gen_3G_RED_Edition_2009 ပါ ကျတော်စမ်းတော့မစမ်းရသေးဘူးဒေါင်းတုန်း :D:D
screen shoot တွေကတော့ လန်းပါ့..
Genuine ပါပါပြီးတားဆိုတော့ သူခိုးတံဆိပ် လွတ်မယ်ထင်တယ် :D:D
တိုကြီးရသာရေ နှိပ်စက်တော ့မှာလား ရက်ပစ် က ဟာတွေ ပေးပြီးတော ့... :d
ပရီမီယန်အကောင့်လှူဒန်းသူတွေရှိတုန်းပေးတာလေ... :d:d:d ပရီမီယန်အကောင့်နဲ့ဆိုရပါတယ် နဲနြဲကြိုးစားကြည့် ပေးနိုင်မဲ့လူတွေဆီကတောင်းပေါ့ :d:d:d
ရက်ပစ်ကို နာပေးမယ်လေ။ တစ်လစာ။ 17000 ကျပ်နဲ့ :d:d:d ဒါတောင် ဒီနေ့ဘဲနော်။ နောက်နေ့ဆို တစ်ရက်ရော့သွားမယ်
ဒါလေးကတော့ XP SP-3 ဒီဇိုင်နာများတွက် ပါခင်ဗျာ...
hot ဖိုင်ကဆွဲတဲ့နည်းလေးကတော့ ကျတော်လက်ရှိသုံးနေတာ free user နဲ့ဝင်တယ်ပြီးတော့ countdown ရေပြီးရင် click to downlod ကို r-click လုပ်ပြီး property ကနေ လင့်ကိုယူပြီ Gigaget ထဲထဲ့ဆွဲပါတယ် တော်တေ်ာလေးမြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကွန်ကောင်းရင်ပေါ့ :D:D IDM နဲ့လဲရမယ်ထင်တယ် မရခဲ့ရင်တော့ ခွေးလွှတ် :D:D
ဖိုင်ကဆွဲတဲ့နည်းလေးကတော့ ကျတော်လက်ရှိသုံးနေတာ free user နဲ့ဝင်တယ်ပြီးတော့ countdown ရေပြီးရင် click to downlod ကို r-click လုပ်ပြီး property ကနေ လင့်ကိုယူပြီ Gigaget ထဲထဲ့ဆွဲပါတယ် တော်တေ်ာလေးမြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကွန်ကောင်းရင်ပေါ့ :D:D IDM နဲ့လဲရမယ်ထင်တယ် မရခဲ့ရင်တော့ ခွေးလွှတ် :D:D
IDM နဲ့လည်းရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ speed ကတော့ တော်တော်လေးနှေးပါတယ်။
ရပ်ပစ်ရှယ်မှ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ ခက်ခဲသူများအတွက် MediaFire ကလင့်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (ဟီး ကိုပရစ် စိတ်ချိုးနဲ့နော် :P)
Windows Vortex Vista 3G "Red" 8.2009 (USB Edition)
http://hotfile.com/dl/10781229/0ad6638/Vortex3G.USB.8.2009_dl4all.com.part1.rar.html http://hotfile.com/dl/10781230/e69367e/Vortex3G.USB.8.2009_dl4all.com.part2.rar.html http://hotfile.com/dl/10781231/e4479bf/Vortex3G.USB.8.2009_dl4all.com.part3.rar.html http://hotfile.com/dl/10781232/6fcad94/Vortex3G.USB.8.2009_dl4all.com.part4.rar.html
အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ဆက်ဖတ်ပါ..\_:D/
Now !! Windows Vortex Vista Third generation 3G "Red" 2009 USB Edition with full components and functions run directly form USB Flash .
Boot your computer form the USB Flash and the computer will boot and load Windows Vortex 3G with full functions and components and working as normal withoutaHard Disk .
1- Decompress all files .
2- You will get ISO image .
3- Write your ISO image to USB Flash by Ultra ISO 9.3.3.2685 .
Base on..........: Windows XP SP3 Professional Final
Platform.........: Windows Vista
Category.........: USB Operating System
Compress Size....: 797 MB
Informations about Windows Vortex 3G USB Edition :
# Vortex third generation takes the form of "Windows XP" operating system with service pack three (SP3) with the latest updates which officially issued by Microsoft corporation including programs and security updates.
vortex tools v3.0 security :
extra control panel features :
အရေးထဲ ..ကြေငြာဝင်နေသေးတယ်..အဟင် ့
Xp SP -3အော်လ်တာနေးလ်တစ် ဗားရှင်း 3.1 x86 August 2009 ဗားရှင်းပါဗျာ...
XP - SP-3 Lakost v 9.21.7 လေးပါ 642Mb ဆိုတော့ CD တစ်ချပ်စာပဲဗျ...
Ghost xp sp-3 Se7en Pro v4.3 ပါခင်ဗျာ အမြင်ကတော့လန်းချက်...
XP PRO SP3 Cyber Version တဲ့ ဆိုင်ဘာကဖေးပိုင်ရှင်များရင်တုန်စရာ အဲ့လေ ရင်ခုန်စရာ... :D:D 692 M CD တစ်ချပ်စာပါပဲ...
Black XP 37 တဲ့ဗျာ... 700M CD တစ်ချပ်စာပါပဲ..
ဒီသရက်မှာ ကျတော် xp ကို ၈ မျိုးတင်ပေးပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာ.... ခုထိ ဒေါင်းဖို့အတွက် ထူးခြားမှု့သိပ်မတွေ့ရလို့ပါ.... CD ခွေဆိုင်တွေက ဝယ်သုံးကြမယ်ထင်တယ်နော်... :106::106::106: ကျတော်လဲ xp တွေအမျိုးမျိုးထွက်လာတဲ့ နောက်ပိုင်းကိုနဲ့အစဉ်ပြေ တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ လတပတလေး တွေသုံးစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ ပါ... CD ဆိုင်ကရောင်းတာပဲဝယ်သုံးရတာထက်စာရင် ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တာလေးတွေ ရွေးပြီးယ ူလို့ရအောင်ပါ.... အင်တာနက်ဆိုင်များအနေနဲ့ လဲ CD ခွေကူးခ အနေနဲ့ပြန်လည်ဖြန့်ဝင်ပေးရင် ဆိုင်အတွက်ဝင်ငွေရသလို မန်ဘာတွေအနေနဲ့လဲ အခွေဖိုးစျေးသက်သာလို့ပါ.... တကယ်လို့ စိတ်ဝင်စားမှုသိပ်မရှိဘူးဆိုရင် ကျတော်ထပ်မတင်တော့ပါဘူးဗျာ သတင်းလေးတွေ ပဲပေးတော့မယ်နော်... ပုံတွေများလို့ db လေးရင် မောင်စေတန်မေတ္တာ ပို့နေဦးမယ် :D:D လူစိတ်မဝင်စားတဲ့သရက်မှာပုံတွေများပြီး db လေးလို့... :D:D
ဒီသရက်မှာ ကျတော် xp ကို ၈ မျိုးတင်ပေးပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာ.... ခုထိ ဒေါင်းဖို့အတွက် ထူးခြားမှု့သိပ်မတွေ့ရလို့ပါ.... Cd ခွေဆိုင်တွေက ဝယ်သုံးကြမယ်ထင်တယ်နော်... :106::106::106: ကျတော်လဲ xp တွေအမျိုးမျိုးထွက်လာတဲ့ နောက်ပိုင်းကိုနဲ့အစဉ်ပြေ တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ လတပတလေး တွေသုံးစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ ပါ... Cd ဆိုင်ကရောင်းတာပဲဝယ်သုံးရတာထက်စာရင် ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တာလေးတွေ ရွေးပြီးယ ူလို့ရအောင်ပါ.... အင်တာနက်ဆိုင်များအနေနဲ့ လဲ cd ခွေကူးခ အနေနဲ့ပြန်လည်ဖြန့်ဝင်ပေးရင် ဆိုင်အတွက်ဝင်ငွေရသလို မန်ဘာတွေအနေနဲ့လဲ အခွေဖိုးစျေးသက်သာလို့ပါ.... တကယ်လို့ စိတ်ဝင်စားမှုသိပ်မရှိဘူးဆိုရင် ကျတော်ထပ်မတင်တော့ပါဘူးဗျာ သတင်းလေးတွေ ပဲပေးတော့မယ်နော်... ပုံတွေများလို့ db လေးရင် မောင်စေတန်မေတ္တာ ပို့နေဦးမယ် :d:d:d လူစိတ်မဝင်စားတဲ့သရက်မှာပုံတွေများပြီး db လေးလို့... :d:d:d
နင်က အင်ထရက်ရှင်ရှိအောင်မှ မရေးတာကို။ :d
ကျတော့်ဟာကျတော်ပဲရသလောက် ဆွဲပြီးသကာလ ခင်မင်ရင်းစွဲရှိသော mz မန်ဘာဝင်အင်တာနက်ဆိုင်များတွင် သွားရောက် ကာထားရှိထားပေးမည်ဖြစ်ပြီး.... ရယူနိုင်မည့်ဆိုင်များကို သွားရောက်ယူဆောင်နိုင်မည့်အျိန်တွင် ပြန်လည် ပြောကြားပေးသွားပါမည်...
ဒါဆိုလည်းမြန်မြန်ဒေါင်းပြီး မြန်မြန်ပြောတော့လေ ကိုအရသာ :d
အဲဒါပဲပိုကောင်းပါတယ်ဗျာ နို ့မို ဆိုနည်းနည်းနောနော်ဆွဲရမှာမဟုတ်ဘူး နောက်ပြီးအပိုင်းအပိုင်းနဲ ့ဆိုတော့ အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်ဗျာ :d:d:d
နောက်ဆုံးအနေနဲ့7နဲ့အတူဆုံး XP လေးပါဗျာ... ကိုပုရင်ကိုဆွဲဖို့ပေးထားပါတယ်... သူဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ဆီမှာတောင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
ရပါဘီ လိုချင်သူများ တောင်းနိုင်ပါတယ်ဗျား..........
တိုကြီး ပြန်လာမှ ဘဲ ယူတော ့မယ်.. ဖြစ်တယ်နော်..
Rs ဆိုတော ့အကောင့်ရှီပေမဲ ့ကွန်နက်ရှင်က ဒေါင်းလို ့၇ဘူးဗျ
mediafire လေးဆိုနိပ်ကွာ ခုတော့ ဟင့်ဟင့်:((:((
ဒါလေးကြိုက်တယ် ဗျာ hotfile ကြီးက ကျွန်တော်ဆို parallel ဒေါင်းလုဒ်ပဲပြနေတယ်ဗျာ
cd ပါ free ပေးပါ့လားဟင်။ ကူခတော့ပေးပါတယ် တူများတွေကူတာတော့ တခွေ 100 တဲ့နော်:D:D:D
ကျွန်တော်ကြိုက်တာလေးတွေဒေါင်းမလို့ ဟာ rapid ကြီးမို့လို့ဗျ ။အဲဒီကောင်ဆိုမြင်တောင်မမြင်ချင်ဘူး။မန်ဇက်က senior တွေအပိုင်ရှိနေလို့တာအသာကြည့်နေတာ ။နို့မဟုတ်၇င် ဟက်ပြီးပြီ:D:D:D:D (အိပ်မက်ထဲမှာပြောတာနော် ဟက်တတ်ဘူး)
ကို၇သာ၇ဲ xp လေးတွေဒေါင်းပြီးသွားပါပြီ။ xp 2009 လေးတော့ဆွဲပြီးသွားပြီ ကိုပ၇င့်၇ဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပါ။
ကျန်တဲ့အထဲက ဆိုဒ်ဘာပ၇ိုလေးဆွဲတော့ file not found တဲ့ ဟင့်:((:((:((
ကို ဘီကြား (ဘားကြည်) ရဲ့တောင်းဆိုမှု့ ကြောင့်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အရင် တစ်ခုက ကော်ပီရိုက် နဲ့ညိတဲ့အတွက် mirror တွေအကုန်လုံးကနေဖျက်ချလိုက်ပါတယ်... ခုနောက်တစ်မျိုး cyber version ပါ Cyber Se7en Black edition
mirror -1 Uploading
mirror -2hot file
ကိုဘားကြည် PM ပြန်မပို့တော့ဘူးနော် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ......
ကျေးဇူးပါဗျာ ဒေါင်းလိုက်ပါဦးမယ် နံက်ဆိုကွန်လေးကောင်းလို့ လေ။ပွဲတိုင်းကျော် hotfile ကပါလာပြန်ပြီဟွန့်
တသက်လုံးထိန်းလာတဲ့ နာ့နာမည်လေးတော့ပျက်ပါပြီ (:((